Ministirri Ittisa Biyyaa rakkoo naannoo Somaalee Magaalaa Jigjigaa keessatti uumame to’achuufi uummata naannichaa miidha jalaa baraaruuf bu’ura heera mootummaatiin tarkaanfii akka fudhatu ibsa galgala kana baaseen beeksisee jira. - Raabbiirraa Oromiyaa
Raayyaan ittisa biyyaa humnoota nageenyaa kaan waliin ta’uun rakkoo Jigjigaa keessatti uumame to’achuuf yaaliin godhe hin milkoofne, kanaaf tarkaanfii fudhachuuf dirqameera jedhe ibsichi.
Mootummaan naannoo Somaalee garuu kana balaaleffatee jira.
Itti gaafatamaan Biiroo Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Somaalee Obbo Idriis Ismaa’el Abdii yaada BBC’f kennaniin kana jedhan.
“Heera mootummaa sirna Federaalizimii irratti hundaa’e qabna. Humnoonni mootummaa Federaalaa yoo mootummaan naannoo gaafate qofa bobba’uu danda’u, kunis yoo rakkoon nageenyaa humna naannoon ol ta’e uumame qofa. Humni mootummaa Federaalaa gaaffii keenya malee naannoo keenya seenuun seeraan ala, heeras kan cabsudha. Ammaaf foxxooquuf hin jirru, sirna Federaalizimiin bulla garuu foxxoquun yaada badaa miti. Heera mootummaan kan mirkanaa’edha.”